Dhawaan, Nantong Chanyoo waxay taariikh cusub ka dhigtay taariikhda! Dadaalka in kabadan hal sano, KDMF-tii ugu horeysay ee Chanyoo waxaa ogolaaday MFDS. Maadaama aan nahay soo saaraha ugu weyn ee Rosuvastatin Calcium dalka Shiinaha, waxaan jeclaan lahayn inaan u furno bog cusub suuqa Korea. Iyo alaabooyin badan ayaa b ...
Shahaadada Diiwaangelinta (Rosuvastatin)
Farqiga u dhexeeya Ticagrelor iyo Clopidogrel
Clopidogrel iyo Ticagrelor waa antagonisteyaasha 'P2Y12 receptor antagonists' kuwaas oo xakameynaya saxanka adenosine diphosphate (ADP) iyaga oo si xushmad leh u xakameynaya ku xirnaanta adenosine diphosphate (ADP) ee loo yaqaan 'P2Y12 receptor plate' iyo waxqabadka qaybta labaad ee dhexdhexaadinta 'glycoprotein GPII.b / III.a'. Daro ...
Farqiga u dhexeeya kiniiniyada kalsiyum ee atorvastatin iyo kiniiniyada kalsuum rosuvastatin
Kiniiniyada kalsiyum ee 'Atorvastatin' iyo kiniiniyada rosuvastatin ee kaalshiyamka ah labaduba waa dawooyin hoos u dhiga lipid-ka 'statin', labaduba waxay ka tirsan yihiin daroogooyinka 'statin' ee aadka u awoodda badan. Kala duwanaanshaha gaarka ahi waa sidan soo socota: 1. Marka laga eego dhinaca farmasiga, haddii qaddarku isku mid yahay, saamaynta dhiigga ee hoos u dhigaysa rosu ...
Maxaa laga Ogyahay Rosuvastatin
Rosuvastatin (magaca caanka ah Crestor, oo ay suuq geynayso AstraZeneca) waa mid ka mid ah dawooyinka dawooyinka statin-ka loo isticmaalo. Sida statins kale, rosuvastatin waxaa loo qoraa si loo wanaajiyo heerka dhiigga qofka iyo in la yareeyo halista wadnaha iyo xididdada. Intii lagu gudajiray tobankii sano ee hore ama wixii rosuvastatin ahaa ee suuqa ku jiray, i ...
Hambalyo Sanad guurada 70aad ee Warshadda Daawada Changzhou !!!
Ilaa Oct. 16, 2019, Changzhou Pharmaceutical Factory wuxuu leeyahay taariikh 70 sano ah, wuxuuna daboolay 110000m2 wuxuuna shaqaaleeyay 900 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 300 farsamoyaqaano leh takhasusyo kala duwan. Takhasus u leh soo saarista dawooyinka wadnaha iyo xididada ...
Cudurka faafa ee caalamiga ah ee COVID-19 wuxuu bedelay diirada loosaaray kahortaga faafida iyo xakameynta infekshinka dhamaan meelaha aduunka. WHO wax dadaal ah ugama tageyso inay ugu baaqdo quruumaha oo dhan inay xoojiso midnimada iyo iskaashiga la dagaallanka cudurka faafa ee faafa. Dunida saynisku waxay raadisay ...
CPhI & P-MEC China 2019 ayaa u dabaaldegay oo helay guul weyn oo loogu talagalay Warshadda Daawada ee Changzhou!
MAAMULKA R & D MAAMULKA BARNAAMIJKA R&D ee Dhisay Machadka Cilmi-baarista Daawada, oo leh saldhig telefishanka dib-u-celinta dib-u-celinta, isku-darka ilaha si buuxda, dardar-gelinta horumarka horumarka ...